User talk:Htoo Ra Aung - ဝီကီပီးဒီးယား
User talk:Htoo Ra Aung
၁ ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Htoo Ra Aung !
၂ Interwiki link ချိတ်ဆက်ခြင်း
၃ File:U myae.png ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာ
၄ File:Krystal Boyd.jpg အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း
၆ File:Spur sep 1989 issue cover.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာ
၇ File:J-me heaven of life album cover.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာ
၈ more info on uploaded file
၉ Community Insights Survey
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Htoo Ra Aung ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၇:၁၃၊ ၁၂ မတ် ၂၀၁၇ (UTC)
Interwiki link ချိတ်ဆက်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Interwiki link ချိတ်တယ်ဆိုတာက my.wikipedia က မြန်မာနိုင်ငံ' ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို en.wikipedia ထဲက Myanmar ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ချိတ်တာပါ။ အခုမှ အသစ်ရေးလိုက်တဲ့ (enwiki ထဲက ဘာသာပြန်ခြင်း etc) ဆောင်းပါးတွေဆိုရင် သူ့ဘာသာ interlink မချိတ်ပါဘူး၊ ချိတ်လိုက်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်က languages (ဘာသာစကားများ) အောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အခြားဘာသာစကားသုံး wikipedia တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ မြင်ရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကလည်း လွယ်ပါတယ်။ အခုမှ ရေးလိုက်တဲ့ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို ဘာသာစကားများ အောက်က လင့်များပေါင်းထည့်ရန် ကနေ ဘာသာစကား >>en ကို ရွေးပြီး စာမျက်နှာ မှာ အသစ်ရေးလိုက်တဲ့ enwiki ထဲက ဆောင်းပါးနာမည်ကို ထည့်ပြီး စာမျက်နှာနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ ဘရို အသစ်ရေးလိုက်တဲ့ ပေတလူ မိလတ် ဆိုရင် enwiki မှာ Pierre de Milard ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာမျက်နှာ ရှိတယ်။ အဲဒီနာမည်နဲ့ interlink လုပ်ရုံပါပဲ။ နောက်ရေးမယ့် ဆောင်းပါးတွေကျရင် ကိုယ့်ဘာသာ ချိတ်ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင်လည်း မေးနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၃၊ ၃၁ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
File:U myae.png ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:U myae.png ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာတွင် မည်သူဖန်တီးခဲ့သည်ဆိုသော အကြောင်းအရာ မပါဝင်သည့်အတွက် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေသည် မပြတ်မသား ဖြစ်နေပါသည်။ အကယ်၍ ဤဖိုင်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါက မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူကို သင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤဖိုင်ကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုမှ ရရှိခဲ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရယူခဲ့သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကြောင်းအရာများ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါ။ အကယ်၍ မူလမူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့ ဆက်နွယ်မှုမရှိပါက ထိုမူလပိုင်ဆိုင်သူကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာအား ပြင်ဆင်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပေးပါ။
ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုပြီး ဝီကီပီးဒီးယားသို့ မည်သည့်ဖိုင်များ တင်သင့်/မတင်သင့်ဆိုသည်ကို လေ့လာပါ။ သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သိလိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါက မီဒီယာ မူပိုင်ခွင့် မေးခွန်းများတွင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၄၇၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
File:Krystal Boyd.jpg အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
File:Krystal Boyd.jpg ဖိုင်အား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။ ဖိုင်သည် မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ထားသည်ဟု ယူဆသည့်အတွက် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရမည့် သတ်မှတ်ချက် F9 အရ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေရေးရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများမှ ရယူထားသည့် မူပိုင်ခွင့်ရှိ အကြောင်းအရာများအား လက်မခံနိုင်ပါ။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သင်ထည့်သွင်းလိုက်သည်များသည်လည်း ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်ပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်နေပြီး ထပ်တလဲလဲ ချိုးဖောက်သူများသည် တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၂၉၊ ၁၈ မေ ၂၀၁၈ (UTC)
File:New sky blue page of sunflower cover.png ဖိုင်ကို CC4.0 လိုင်စင်နဲ့ တင်ခဲ့တာ တွေ့ပါတယ်။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးပုံဖြစ်တဲ့အတွက် CC လိုင်စင်မဟုတ်ပါဘူး။ မူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ ပုံကို အသုံးပြုဖို့ အခမဲ့ မဟုတ်သော ပုံများ အသုံးပြုရခြင်း လမ်းညွှန်ချက် နဲ့ ကိုက်ညီရပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် ပုံဆိုဒ်အသေး ပြန်တင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပုံတွေ တင်တဲ့အခါ ရင်းမြစ်၊ လိုင်စင်၊ ဖန်တီးသူ စတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့တကွ တင်ပေးစေလိုပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၀၄၊ ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
File:Spur sep 1989 issue cover.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:Spur sep 1989 issue cover.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာတွင် မည်သူဖန်တီးခဲ့သည်ဆိုသော အကြောင်းအရာ မပါဝင်သည့်အတွက် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေသည် မပြတ်မသား ဖြစ်နေပါသည်။ အကယ်၍ ဤဖိုင်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါက မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူကို သင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤဖိုင်ကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုမှ ရရှိခဲ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရယူခဲ့သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကြောင်းအရာများ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါ။ အကယ်၍ မူလမူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့ ဆက်နွယ်မှုမရှိပါက ထိုမူလပိုင်ဆိုင်သူကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာအား ပြင်ဆင်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပေးပါ။
ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုပြီး ဝီကီပီးဒီးယားသို့ မည်သည့်ဖိုင်များ တင်သင့်/မတင်သင့်ဆိုသည်ကို လေ့လာပါ။ သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သိလိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါက မီဒီယာ မူပိုင်ခွင့် မေးခွန်းများတွင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၀၈၊ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ (UTC)
File:J-me heaven of life album cover.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:J-me heaven of life album cover.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက်စာမျက်နှာတွင် မည်သူဖန်တီးခဲ့သည်ဆိုသော အကြောင်းအရာ မပါဝင်သည့်အတွက် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေသည် မပြတ်မသား ဖြစ်နေပါသည်။ အကယ်၍ ဤဖိုင်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါက မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူကို သင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤဖိုင်ကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုမှ ရရှိခဲ့ပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ရယူခဲ့သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အကြောင်းအရာများ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါ။ အကယ်၍ မူလမူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့ ဆက်နွယ်မှုမရှိပါက ထိုမူလပိုင်ဆိုင်သူကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိုင်အကြောင်း ဖော်ပြချက် စာမျက်နှာအား ပြင်ဆင်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပေးပါ။
ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုပြီး ဝီကီပီးဒီးယားသို့ မည်သည့်ဖိုင်များ တင်သင့်/မတင်သင့်ဆိုသည်ကို လေ့လာပါ။ သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သိလိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါက မီဒီယာ မူပိုင်ခွင့် မေးခွန်းများတွင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၄၈၊ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ (UTC)
more info on uploaded file[ပြင်ဆင်ရန်]
Hello! I added necessary information on two of your uploads (File:Mone swal poster.jpg and File:Golden lotus 1974 poster.jpg). Could you please add detail information (like I added) for your other recent uploads?
File:Fly because of uncover poster.jpg
File:Dark cinema poster.jpg
Thanks. Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၃၅၊ ၂၇ မတ် ၂၀၁၉ (UTC)
Hi Htoo Ra Aung,
RMaung (WMF) ၁၄:၃၀၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Htoo_Ra_Aung&oldid=475165" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။